Kukarukureta of kanyika nheyo
Kukarukureta pamusoro kanyika nheyo zvinhu
Kutaridzwa mhando nheyo
nezvechisarudzo 4 nezvechisarudzo 5
The chinjikira misara G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mira nembariro V 0 1 2 3 4 5
The unobatanidza tsvimbo Z 0 1 2 3 4 5
Pakukora mapuranga formwork T
Kureba mapuranga L
Rakafara bhodhi E
Meshkov 1 cubic mita nekongiri F
simende (por bhegi) M
jecha (nokuti 1 tani) P
yakapwanyika ibwe (nokuti 1 tani) B
bhodhi (nokuti 1 cubic mita) W
Fittings (nokuti 1 tani) N
X - hwaro upamhi
Y - hwaro urefu
A - pakukora nheyo
H - hwaro kukwirira
C - kure kune zambuko akabatana
S - danho pakati yeimwe
G - The chinjikira misara
V - mira nembariro
Z - The unobatanidza tsvimbo
The zvaida uwandu esimende hwokubereka mumwe cubic mita nekongiri yakasiyana pachiitiko chimwe nechimwe.
It kunobva hachizi esimende, zvinodiwa mugiredhi kwemifananidzo kongiri, hukuru uye kukura fillers.
Hazvina zvakafanira kudzokorora sei kukosha magadzirirwo reimba kuverenga uwandu zvokuvakisa imba nheyo.
Nekuti mari imwe monolithic nheyo anosvika chetatu kukosha mumba.
basa iri zvichaita aivabatsira kuronga uye kukarukureta reimba nheyo. Zvichakubatsira kuti ngaaverenge uwandu nekongiri, chisimbiso, shuttering mapuranga mudziyo kanyika nheyo.
Nzvimbo nechigadziko nheyo (somuenzaniso, kuti huwandu mvura kufukidza rapera bhesimendi)
Huwandu kongiri kuti hwaro uye mapango Slabs kana kudira munhu zimba uriri (kuti zvichava kunakidza, apo, nokuda zvokutanga kumbokanganisawo chokuwanziridza hakusi kongiri zvakakwana)
Chisimbiso - nhamba valves, zvoga kukarukureta waro uremu, yakavakirwa kureba kwayo uye dhayamita
Nzvimbo formwork uye uwandu matanda cubic metres uye zvidimbu
Kunharaunda hukawanika zvose (nokuti kukarukureta pamusoro bhesimendi mvura) uye divi hukawanika uye chawo
Added kukarukureta nezvaizoitika nheyo zvinhu.
Chete chirongwa achaswedera mifananidzo nheyo.
Ndinovimba kuti basa vachava kubatsira vaya vari kuvaka nheyo nemaoko ake uye mainjiniya-vavaki.
Chikamu uye uwandu esimende, jecha uye mavhu kugadzira kongiri vanopiwa default reference, sezvo ndakarumbidzwa Vagadziri esimende.
Sezvo mutengo esimende, jecha, mavhu.
Zvisinei, iye Kuronga rapera kongiri ari zvakasimba novimba saizi zvikamu zviduku amabwe akapwanyika kana mavhu, simende muchiso, ayo freshness uye okuchengetera ezvinhu. Zvinozivikanwa kuti mumakore mazhinji okuchengetera simende anorasikirwa zvivako zvayo uye simende unhu kuipa kurumidzei panguva yakakwirira mwando.
Tapota ona kuti mutengo jecha uye mavhu raanotaura purogiramu 1 tani. Vendors Akazivisawo mutengo pa cubic mita jecha, akapwanyika ibwe kana mavhu.
Huwandu jecha kunoenderana wayo mavambo. Somuenzaniso, remurwizi kunorema kupfuura basa.
Norukangarabwe uye marara akaoma. Maererano siyana mabhuku 1 cubic mita kurema kubva 1200 kusvika 2500 makirogiramu zvichienderana kukura. Kwakanyanya - kupfuura yakaisvonaka.
Saka kuverenga mutengo paminiti savi jecha uye mavhu ungafanira kunatsiridza kana vanowatengesa.
Zvisinei, kuverenga vachiri kunobatsira kuziva zvinofungidzirwa mari nokuda zvokuvakisa nokuti wakazadza yepasi. Usakanganwa mumwe waya nokuda knitting Fittings, zvipikiri kana screws nokuda casing, hurukuro zvokuvakisa, mutengo kupikidura uye pabasa rokuvaka.